Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo maanta gaaray magaalada Baydhabo – Kalfadhi
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo maanta gaaray magaalada Baydhabo
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa maanta magaalada Baydhabo kusoo dhoweeyay wafdi ballaran oo uu hoggaaminaayo Gudoomiyaha Guddiga Gaarka, Arrimaha Sharciga iyo Doorashooyinka Baarlamanka federaalka ee Soomaaliya.
Kulan u dhaxeeyay mas’uuliyiinta iyo guddiga oo ka dhacay xarunta Baarlamanka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa looga hadlay in Guddiga kulamo uu la qaadan doono madaxda Dowlad Goboleedka koonfur Galbeed Soomaaliya Iyo Bulshada Qeybahooda kala duwan.
Cabdullahi Abuukar Xaaji, Gudoomiyaha guddiga Gaarka Arrimaha Sharciha Doorashooyinka Baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegay in magaalada si wanaagsan maanta loogu soo dhoweeyay isla markaana warbaahinta ay la wadaagi doonaan waxa kasoo baxa kulamadooda.
Faah-faahinta halkan kala soco.
Haweenka baarlamaanka oo gacan ka geysanaya doorka dumarka ee ka qeyb galka siyaasadda Soomaaliya